The True Adventures of Wolfboy (2019) | MM Movie Store
IMDB Rating 6.1 ရထားပွီး IT Chapter 1,2 နဲ့နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ လူငယျသရုပျဆောငျလေးJaeden Martell ရဲ့ မွခှေေးလူသား ကားလေးလာပါပွီ။
ဇာတျလမျးအညှနျး**********************မိခငျမရှိဘဲ အဖနေဲ့အတူနရေတဲ့ ပေါလျဆိုတဲ့ကောငျလေးဟာ ရောဂါတဈခုကွောငျ့ ခန်တာကိုယျတဈခုလုံးအမှေးအမြှငျတှပေေါကျနပွေီး ရိတျရငျလညျး နှဈဆ ပိုပိုထူလာပါတယျ။ဒီပုံပနျးသဏ်ဍာနျကွောငျ့ ရှယျတူကလေးတှကွေားထဲမှာ လှောငျပွောငျခံရ့ပွီး လူတောမတိုးခဲ့ပါဘူး ။
အသကျ ၁၃ နှဈပွညျ့မှေးနမှေ့ာပတျဝနျးကငျြရဲ့အတိုကျအခိုကျတှကေို မခံလိုတာကွောငျ့ အိမျပွေးတဈယောကျဖွဈခဲ့ပွီး သူတဈခါမှမမွငျဖူးတဲ့ အမကေိုရှာပုံတျောဖှငျ့ပါတော့တယျ။ လမျးမှာသူ့လိုမြိုး ဆိုးမိုကျနတေဲ့ကလေးတဈသိုကျနဲ့သူငယျခငျြးတှဖွေဈခဲ့ပွီး အခကျအခဲမြိုးမြိုးနဲ့ကွုံရပါတော့တယျ….
သူ့ရဲ့ ခန်တာကိုယျအမှေးအမြှငျတှကေရော ဘာကွောငျ့ပေါကျလာတာလဲ….? သူရှာနတေဲ့ မိခငျကိုရော ရှာတှသှေ့ားမှာလား….ဆိုတာကိုတော့ဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျပါ။
IMDB Rating 6.1 ရထားပြီး IT Chapter 1,2 နဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ လူငယ်သရုပ်ဆောင်လေးJaeden Martell ရဲ့ မြေခွေးလူသား ကားလေးလာပါပြီ။
ဇာတ်လမ်းအညွှန်း**********************မိခင်မရှိဘဲ အဖေနဲ့အတူနေရတဲ့ ပေါလ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ရောဂါတစ်ခုကြောင့် ခန္တာကိုယ်တစ်ခုလုံးအမွှေးအမျှင်တွေပေါက်နေပြီး ရိတ်ရင်လည်း နှစ်ဆ ပိုပိုထူလာပါတယ်။ဒီပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကြောင့် ရွယ်တူကလေးတွေကြားထဲမှာ လှောင်ပြောင်ခံရ့ပြီး လူတောမတိုးခဲ့ပါဘူး ။
အသက် ၁၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အတိုက်အခိုက်တွေကို မခံလိုတာကြောင့် အိမ်ပြေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး သူတစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ အမေကိုရှာပုံတော်ဖွင့်ပါတော့တယ်။ လမ်းမှာသူ့လိုမျိုး ဆိုးမိုက်နေတဲ့ကလေးတစ်သိုက်နဲ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး အခက်အခဲမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံရပါတော့တယ်….
သူ့ရဲ့ ခန္တာကိုယ်အမွှေးအမျှင်တွေကရော ဘာကြောင့်ပေါက်လာတာလဲ….? သူရှာနေတဲ့ မိခင်ကိုရော ရှာတွေ့သွားမှာလား….ဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။